Charchit Online Khabar » कोरोना संक्रमित आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउँदा कति खतरा ?
कोरोना संक्रमित आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउँदा कति खतरा ?
प्रकाशित मिति : ६ असार २०७७, शनिबार १८:१५
डब्ल्यूएचओका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडहानम गीब्रिएसुसले कोरोना पोजिटिभ आमाहरुलाई आफ्नो नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउन जारी राख्न आग्रह गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको एक अध्ययनमा स्तनपान गराउँदा संक्रमणको खतराको भन्दा पनि अधिक फाइदाजनक पाइएकाे उनले बताएका छन्।
डा. टेड्रोसले भने, ‘डब्ल्यूएचओले यस मुद्दामा अनुसन्धान गरेको छ र भाइरस जोखिमको तुलनामा बच्चाका लागि स्तनपानको फाइदा अधिक रहेको पाइएको छ। हामीलाई यो थाहा छ कि, ठूला मानिसहरुको तुलनामा बच्चाहरुमा कोभिड–१९ को जोखिम कम हुने गर्दछ। तर, अन्य कयौँ रोगहरु यस्ता रहेका छन्, जसबाट बच्चाहरुलाई अधिक खतरा हुनसक्छ र स्तनपानबाट यस्ता रोगहरुलाई रोक्न सकिन्छ। पछिल्लो प्रमाणका आधारमा डब्ल्यूएचओले भाइरस संक्रमणको जोखिमभन्दा बच्चाहरुलाई स्तनपानको फाइदा अधिक रहेको बताएको छ।
टेड्रोसका अनुसार, संक्रमणकाे आशंका लागेका आमाहरु वा संक्रमण पुष्टि भइसकेको आमाहरुलाई आफ्नो बच्चालाई दुध पिलाउनका लागि उत्साहित गराउनुपर्छ। यदि आमाको स्वास्थ्य अधिक खराब छ अर्थात् अवस्था गम्भीर छ भने नवजातलाई उसको आमाबाट टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ।
डब्ल्यूएचओका अनुसार, हालसम्म कुनै आमाको दुध अर्थात् ब्रेटमिल्कबाट कुनै लाइभ भाइरसको पत्ता लागिसकेको छैन। यसकारण आमाबाट बच्चामा कोरोना संक्रमण फैलने जोखिमबारे प्रमाणित गर्न सकिएको छैन।